Mahaiza mandanjalanja eo amin'ny pejy SEO mba hanomezana lanja ny tranonkala - Fikarohana avy amin'ny Semalt
Ho an'ny raharaham-barotra an-tserasera, ny fananana fandrakofana ampy tsara indrindra indrindra amin'ny aterineto dia fanalahidy. Ho an'ny mpizarazara amin'ny aterineto, ny fandefasana fepetra matanjaka ao amin'ny sehatra Internet toy ny fitaovan'ny fikarohana sy ny media sosialy dia matetika no tanjona voalohany. Ity dingana ity dia ny hahatongavan'ny Lalao Search Engine Optimization. Ny tanjon'ny fampielezan-kevitra SEO dia ny fanamafisana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalan'ny e-commerce amin'ny alàlan'ny famandrihana toerana ambony ao amin'ny SERP an'ny teny sasany amin'ny teny fototra. Amin'io lafiny io, ny tranokalanao dia ambony kokoa, ny olona maro kokoa mitady ny teny fanalahidiny manokana dia mety hitarika ny pejinao
SEO amin'ny pejy SEO dia manampy ireo pejy hahazo ny fahefana amin'ny valin'ny fikarohana amin'ny alalan'ny endrika tahaka ny fanalahidin'ny sokajy sy ny famoronana votoaty - boats kbb. Ny pejin-tranonkala iray miseho voalohany dia manana safidy 99% ahazoana ny ankamaroan'ny tsindry, indrindra rehefa mifanaraka ny votoatiny. Na izany aza, tsy mora ny manao io asa io.
Lisa Mitchell, mpitantana ny Success Successor Semalt , dia mamaritra fomba maro amin'ny fomba ahafahanao manatsara ny SEO ao amin'ny pejy SEO:
Teny fanalahidin'ny teny
Toy ny fanamby hafa an'ny SEO, ny tanjona voalohany dia ny mahita teny manan-danja amin'ny fifaninana.Ny fampiharana toy ny Google AdWords sy SEMrush dia afaka manampy anao hahita teny manan-danja izay manana fifaninanana malemy. Ny teny fanalahidy dia ilaina amin'ny fampiasana azyny votoatin'ny tranonkala. Eto, ny hevitra dia rehefa mametraka ny teny fanalahidy ao amin'ny votoatin'ny tranonkalanao ianao, dia manondro ny votoatiny sy ny itiavanao ny bateria Googledia miseho amin'ny valin'ny fikarohana Google amin'ny manaraka amin'ny olona iray miankina amin'ny rohy..Ny teny fanalahidy dia tokony ho azon'ny faritra manokanatranonkala hahatratrarana ity CTR ity. Ilaina, ohatra, ny teny fanalahidy ao amin'ny lohatenin'ny pejy, ny famaritana meta ary ny pejycontent itself. Ny AdWords dia manana endri-javatra izay mampiseho anao ny metrika sy ny fandalinana ambaratonga maro ny fahombiazan'ny teny fanalahidyo.
Ny votoaty dia tokony hifanaraka amin'ny sambo nokendrenao. Tokony hisy Aoka ho fandaharana mety amin'ny teny fanalahidy ao amin'io pejy io. Ny votoatiny dia tokony ho lava be, araka ny fijerin'ny rakitra na ny fijerena finday.Ataovy azo antoka fa tsy manana duplicate votoaty ianao ao amin'ny pejy izay manatsara. Ny votoaty duplicate dia manolotra URL maromaro, fampihenana ny pejy fahefana ary koa ny laharana.
Ny endriky ny pejy
Ho an'ny Google hananganana pejy iray, dia mila mamaly azy io, ny namana malala ary miaraka aminyrelevant content. Ny algorithm google algorithm dia manome tombony amin'ny alàlan'ny mpampiasa sy ny traikefa. Tokony hamorona pejy Internet ianao izay manisy mpampiasa fotoana fohy, mora ampiasaina ary iray amin'ny haingam-pandeha haingana. Ny fampidirana media sosialy sasantsasany sy ny lahatsary dia mety ho fanampinytombony.
Ho an'ny fanombohana aterineto rehetra dia ilaina ny marketing maromaro.Betsaka ny orinasa manaiky ny teknolojia SEO ary mahavita manamboatra mpanjifa maro ao amin'ny pejy SEO sy ny sehatry ny famolavolana tranonkala. To succeedao anaty aterineto, misy lafiny manan-danja ao amin'ny takila SEO pejy mila fepetra hentitra. Ohatra, ny mpampiasa dia afaka mahazo fitohanan'ny fifamoivoizana amin'ny teny fototrafifantenana ary tombontsoa avy amin'ny tombam-bidin'ny tetik'asa ho an'ny SEO. Aorian'ny fampiasana ireo toro lalana etsy ambony, ny aterinetoNy marketing dia mety hahavokatra. Ireo toro-hevitra ireo dia tsy miankina fotsiny amin'ny fanatrehana mpitsidika marobe fa mandray anjara amin'ny taranaka mitarika koa toy ny famadihana ireo mpitsidika ho mpividy.